‘फेसबुके’ चल्ला राईहरु र गोरु बुझाई ! - Nayabulanda.com
निनाम कुलुङ ‘मंगले’ २१ असार २०७८, सोमबार २०:३२ 450 पटक हेरिएको
विसं २०६५/०६६ वा ०६७ ताकाको कुरा हो । एक राईनी बहिनी (म्याडम) ले मलाई ‘दाई म त गोरु बुझाई भएको मान्छे, जसले जत्ति नै बुझाउन खोजे पनि आपूmले एक पटक बुझी सकेपछि त्यसरी बुझेभन्दा फरक ढंगले कहिल्यै बुभ्mनैै सक्दिन ! एकोहोरो बुझे पछि बुभ्mयो, बुभ्mयो । खासमा म अरुले बुझाए जस्तो फरक ढंगले बुभ्mनै चाहन्न ।’
ती बहिनी पूख्र्यौली घर खोटाङ जिल्ला र हालसालैचाहिँ (त्यो वेला) उदयपुर जिल्लामा बसोबास गर्छु दाई भन्थी । उनका दाजु ठीकठीकैको गायक पनि हुन् क्यारे । जे होस्, आपूm त्यो वेलाको जनसेनाको श्रीमती हुँ भन्थिन । आपूm पनि क्याम्पस पढ्दा ताका प्रहरी भूmटो आरोपमा मओवादी भनी पक्डेर थुनेपछि निकाल्ने कोही नहुँदा आपूmलाई पढाउने एक प्राध्यापक आएर छुटाए । तर, माओवादी हुने सर्तमा । धरानमा सहररिया माओवादी भईन । वास्तवमा त्यसरी माओवादीको कार्यलयमा काम गर्दा नै ती जनसेना पनि आउने, जाने क्रममा थाहै नपाई ‘लप्प !’ पर्यो । कतिसम्म भने ती जनसेना उदपुरसम्म पनि धाउन थाले । यो विषयमा भन्दा बढी नलेखौं । किनभने, लेख्ने विषय अर्कै हो ।
जे भए तापनि पछि बुभ्mदा ती जनसेनासँग छुटानाम भएर खोटाङ जिल्लाकै राईसँग विवाह भएर पनि बच्चा भएको छ अरे भन्ने सुने । निक्कै धेरै पढेको हुँ भन्थिन ती राईनी म्याडमले । प्रा. डा. टंक न्यौपाने सरसँग गुरु थापेर आप्mनो भाषामा (राईको होइन ।) उनको भाषा ‘स’ बाट आउँछ । केही थेसिस लेख्छु भन्थी । त्यसैले मसँग भएका केही किताबहरु पनि चाँडै फिर्ता गर्ने सर्तमा लगिन् । उनी धरान बस्थिन् । तर, किताब लगी सकेपछि धेरै वर्षसम्म पनि फिर्ता गर्ने सुरसार गरिनन् । फोन गर्दा नउठ्ने उठेमा पनि त्यो किताबमा के छ र त्यस्तो पो भन्न थालिन बा !? किताब लिनै भनेर धरानसम्म जाने कुरो पनि भएन । तर, अरु किताब फिर्ता नदिए पनि डोरबहादुर विष्टको ‘सबै जातको फुलबारी’चाहिँ फिर्ता गर न त बहिनी भनेँ । हुन्छ, हुन्छ त भन्ने तर … हुन पनि त्यो वेला ‘सबै जातको फुलबारी’को पुनः प्रकाशन रोकिएको थियो, हत्तपत्त पाईदैन थियो । अहिलेचाहिँ सो किताब पाईन्छ ।
यति लामो भूमिका बाँध्नुको कारण के छ भने, लगभग तीन हप्तादेखि फेसबुकको ‘राई पेज’मा मैले मेरो नयाँ पूरानो लेखहरु निरन्तर पोस्ट गर्दै आएको छु । त्यसमा पनि खास गरी राई के हो ? भन्ने बारेमा लेखेको लेखहरु पोस्ट गर्ने गरेको छु । त्यसमा पनि खास गरी ‘राई !’ के हो ? भन्ने बारेमा लेखेको लेखहरु पोस्ट गर्ने गरेको छु । जर्नल, पत्रपत्रिका, अनलाइन, ज्ञानगुन र जीवनमा केही न केही सिक्न सकिने सञ्चारका अन्य माध्यममा भने खासै आँखा नजाने हाम्रा ‘राई !’ भन्ने कामरेडहरु फेसबुकमा भने यसो आँखा लगाउँदा रहेछन् ! भन्ने राम्रै अनुभव प्राप्त भयो । हो, फेसबुक लगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा सिक्ने कुरा नै हुँदैन ! भन्नेचाहिँ कदापि पनि होइन ।
यसै क्रममा फेसबुकको ‘राई पेज’मा मैले मेरो नयाँ पूरानो लेखहरु निरन्तर पोस्ट गर्दै आउने क्रममा ‘कमेन्ट वा भनौं गालीगलौज !’ पनि निरन्तर आई रह्यो, जुन एक लेखकको लागि प्रेरणको स्रोत नै हो !? तर, कस्तोसम्म भयो वा भई रहेको छ भने, लेखको सुरुमा/शीरमै ‘एक पटक लेख, रचना वा पोस्ट गरेको सामग्री पढेर ‘योयो बेठीक छ, ठीक छ भन्नु पर्दैन !’ भनी कमेन्ट गर्नु होला, जताभावी कमेन्ट नगर्नु होला ! भनेर अनुरोध गर्दै आएको छ/छु । तर, …
यसरी ‘कमेन्ट/गालीगलौज !’ गर्ने चल्ला राई (किनभने, ‘माऊ राई !’हरु राई यायोक्खा (म आपूm त के जान्नु र ? तर, जान्नेसुन्ने महानुभावहरुले भन्नु भएअनुसार ‘यायोक्खा’ शब्द खासमा बान्तावा जातिको भाषा हो अरे, कुनै माईकालाल राईको भाषाको शब्द होइन । तर, नामक एनजिओ (समाजकल्याण परिषद दर्ता नम्बर/एसडब्लुसी–२६५६, काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यलय काजिप्रका/रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५०) को नेतृत्वमा रहेका राई सर राईनी म्याडमहरुछन् चुपचाप छन् । तर, ‘चल्ला राई !’ कामरेडहरु भने, ती राईनी बहिनी (म्याडम) ले मलाई भने जस्तै ‘एकोहोरो गोरु बुझाई गर्छन् आपूmले बुझेभन्दा फरक ढंगले कहिल्यै बुभ्mनैै चाहँदैनन् ! एकोहोरो बुझेपछि बुभ्mयो, बुभ्mयो । खासमा अरुले बुझाए जस्तो फरक ढंगले बुभ्mनै चाहँदैनन् ।’
तर, मलाई के विश्वास छ भने, उहाँहरुमध्ये संभवतः ९२/९३ प्रतिशत देखि ९५/९६ प्रतिशत राई कामरेडहरुको फेसबुक आईडी नक्कली होला । त्यसो त जान्ने बुभ्लनेहरुले भनेअनुसार ‘कुनै पनि व्यक्तिले आपूmलाई मन नपरेको विषय, मान्छे, संघ, संस्था आदिलाई जताभावी गालीगलौज गर्न र आमाचकारी गाली दिन यसरी नक्कली नाममा क्षणिक समयका लागि फेसबुक खोल्ने गरिएको छ वा खोल्ने गरिन्छ अरे ।’ तर, मैले माथि नाम उल्लेख गरेका र नगरेका सबै नाम सूची बनाएर राखेको छु । किनभने, यसरी नक्कली फेसबुक आईडी बनाएर जताभावी गालीगलौज गर्ने र आमाचकारी गाली दिने कामरेडहरुका बारेमा पनि ‘साईबर क्राईम ब्युरो’मा गएर सोधखोज गरेर उनीहरुको वास्तविक नाम पत्ता लगाएपछि फेरि अर्को एक लेख लेख्ने विचारमा छु ।
हुन त अहिले धेरै जसो ‘चल्ला राई !’ कामरेडहरु वा भनौं महाराई कामरेडहरु फेसबुकबाट हटी सक्नु भएको छ । हटेकाहरु समेतलाई मेरो फेरि पनि ह्रदयदेखि नै हार्दिक धन्वयवाद छ । किनभने, हजुरहरुबाट फेसबुकका अन्य आदरणीय महानुभावहरुले पनि ‘धेरै कुरा सिके होलान् !’ भन्ने लाग्छ, किनभने, तपाईहरुले विषयमा केन्द्रित रहेरभन्दा प िअन्ट न सन्टको प्रश्न, गालीगलौज, आमाचकारी गाली र छेडखानी ! मात्रै गुर्न भयो । त्यसका लागि फेरि पनि कुलुङ भाषामा ‘ओलोनुव के !’ हजुरहरु सबैलाई ।
जबकि मैले भन्नै पर्दा यो विषयमा (राई जात वा जाति होइन भन्ने) अहिलेदेखि होइन, जबदेखि मैले राई जात वा जाति होइन भन्ने बुभेmँ, तबदेखि नै लेख्दै आएको छु, बोल्दै आएको छु, जनवकालत गर्दै आएको छु । खासमा राई के हो ? जात हो कि ? जाति हो ? अथवा शासकहरुले दिएको अस्थाई रुपको र जेठो छोरो, जेठो नातिमा सर्दै जाने पदवी वा पगरी मात्रै हो ? भन्ने विषयमा कथित् राई जातिको नाममा खुलेको राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद दर्ता नम्बर/एसडब्लुसी–२६५६, काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासन कार्यलय रजिस्टर्ड नम्बर–३२८/०४९/०५०) का हर्ताकर्ता राई सर, राईनी म्याडमहरु खासमा चम्किनुपर्ने हो ? अभैm पनि समय वा भनौं वेला छँदै राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरु अर्थात् ‘माऊ राई !’हरु चम्केदेखि राम्रो हुने हो । तर, उहाँहरु पटक्कै चम्किनु भएको छैन, किन होला ? तर, जो ‘चल्ला राई !’हरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु चम्किनु भएकोमा पनि ठीकै छ । तर, अभैm पनि विषयमा केन्द्रीत भएर चम्किनु होला, कमेन्ट लेख्नु होला । त्यसो गर्दा राई बाहेकका मान्छेहरुले पनि साँच्चै केही सिक्न सक्ने ठाऊँ रहन्छ । तर, तपाईहरु विषयमा केन्द्रित नरही, अन्ट न सन्टको प्रश्न गर्ने, गालीगलौज गर्ने, आमाचकारी गाली गर्ने र छेडखानी गर्ने गर्नु हुन्छ ?! त्यसरी त मान्छेहरुले के नै सिक्लान् र, के नै जान्लान् ? त्यसैले ‘चल्ला राई !’ कामरेडहरुले ‘माऊ राई !’ कामरेडहरुलाई सम्पर्क गरेर एक पटक कथित् राई जाति बारे यो के भई रहेको हो ? भनी सोधखोज गर्दा अझ राम्रो होला कि ? नत्र भने त …
अभैm पनि ‘चल्ला राई !’ ज्युहरुले यो पक्ष नबुभ्mनु विडम्बना नै हो । वास्तमा माथिल्लो पदमा रहेका राई सर, राईनी म्याडमहरु किन नचम्केका ? जबकि चम्किनुपर्ने ? माथिले पोस्टका राई सर राईनी म्याडमहरु पो हो !? उनीहरु किन नचम्केका ? किन उनीहरु अहिलेसम्म पनि यो विषयमा चुँ ….. नगरी बसेका छन् ? त्यसैले चल्ला राई ज्युहरु, एक पटक म फेरि पनि भन्छु, हजुरहरुले एक पटक कसै गरी माऊ राईहरुसँग सम्पर्क गरेर बुभ्mनु होला, यो विषयमा । साथै कथित् राई जातिको नाममा खुलेको एनजिओका माथिल्लो पदमा रहेका राई सर, राईनी म्याडमहरु कुनै पनि कार्यक्रममा हामी (कुलुङ) लाई देखेपछि परपरै भागीभागी हिडँ्नु हुन्छ/भागी हिँड्नु हुन्थ्यो, किन ? हामीलाई बोलाउदै नबोलाऊ भन्नु हुन्थ्यो/हुन्छ किन ? कथंकताचित हामीलाई बोलाएमा आउँदैनौं भन्नु हुन्थ्यो, किन ? खास गरी यस्तो काम विसं २०७०/०७१ अघि र विसं २०५८/०५९ सालपछि हुन्थ्यो/भएको थियो ।
त्यस्तै एक जना राई डाक्टर साब (संभवतः भाषा विज्ञानका पूरानो राई डाक्टर !) ले त ‘एक जाति राईको २८ भाषा हुँदैन, राई भाषा होइन, त्यसैले तपाईहरुले उठाएको मुद्याको म विरोध गर्दिन, साथै खुलेर समर्थन पनि गर्दिन, सद्भावचाहिँ छ !’ भनी उहिल्यै भनी सक्नु भएको अवस्था हो । त्यसैले ‘चल्ला राई !’ कामरेडहरुका साथै फेसबुकका अन्य आदरणीय महानुभाव ज्युहरु, तपाईँहरु नै भन्नु होस् त म साँच्चै गलत हो ?
फोटो बोरे पनि बोल्नोस् राई ज्युहरु हो, धेरै राईका चल्ला ज्युहरुले, मैले पोस्ट गरेको लेख, रचना वा सामग्रीको विषयमा केन्द्रीत रहेर बौद्घिक बहस र तर्क गर्न नसकेर जताभावी भन्छन्, लेख्छन् । यसै क्रममा एक जना चल्ला राईले अरु नै कसैको फोटोलाई मेरो (‘निनाम कुलुङको बाल्यकाल’) भनेर फेसबुकमा पोस्ट गर्नु भयो । त्यसो गर्न मिल्छ ? यसो गर्नु कहाँको बहादुरी हो ? कसको कसको फोटो मेरो भनेर दुरुपयोग गरेर पोस्ट गर्नु ठीक हो ? त्यसैले त्यसरी अर्कैको फोटो मेरो भनी दुरुपयोग गरेको बारेमा पनि चल्ला राई ज्युहरुले केही न केही लेख्नु वा बोल्नु पर्यो ! ती राईले, मेरो लेखमा केन्द्रित नै नभई अन्टसन्ट कमेन्ट गर्ने, जत्ति गर्दा पनि म नथाक्ने देखेपछि मेरो भनेर कसको कसको फोटो फेसबुकमा राख्नु भएको हो । त्यसैले अब म ती राईलाई मेरो फोटो हो भनी अर्कैको फोटो पोस्ट गरेकोमा, अरुको फोटो दुरुपयोग गरेको, मानहानी गरेको, मानसिक यातना दिएको मुद्या हाल्न सकिन्छ भनी वकिलले पनि सुझाव दिनु भएको छ ।
तर, एक जना राई ज्युले कमेन्टमा ‘नापेर देखाऊ न … के को बकबक ! भने । तर, मैले नापेर देखाउनु पनि समय त आउनु पर्यो नि !’ होइन र राई ज्युहरु ? त्यसमाथि हिँडडुल गर्नलाई कोरोना महामारी घटेको छैन, जोखिम कायमै छ । अझ त्यसमाथि पनि म आपूm ‘मुटु (देब्रे पाटो प्रति मिनेट १५ देखि २० पटक मात्रै रगत फाल्न सक्छ) रोगी, ब्लड प्रेसर हाई, युरिक एसिड (१०.१) रोगी, पायल्स् रोगी, दिमागको नसा सुक्ने, सुकेको रोगी आदि हो अथवा रोगी छु ।’ त्यही भएर जताभावी हिँडडुल गर्न पन जोखिम छ ।
त्यसैले चल्ला राई ज्युहरु आप्mनो असहमति वा विमति राख्दा कम्तिमा एक पटक लेख, रचना वा पोस्ट गरेको सामग्री पढेर कमेन्ट गर्नोस्, यो बेठीक छ भन्नोस्, ठीक छ भन्नु पर्दैन । किनभने, फेसबुकमा त म र हजुर वा अरु कोही एकजना वा दुई जना मात्रै त हुँदैनन्, होईँदैन, होइन र ? फेरि जो सुकैले जताभावी कमेन्ट गर्दा पनि सहेकै थिए । हो, होइन भनी जाँच गर्नलाई उहाँ लगायत अरुको पूरानो कमेन्ट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ । तर, जब बौद्यिक ढंंगले, तार्किक ढंगले, वा भनौं एक सामान्य साक्षरले जत्ति पनि सीमारेखा नराखेर आमचकारी गाली गर्दा पनि म थाकिन, त्यसपछि एक जना प्रताप जङ कुुलङ राई ज्युले सो फोटो मेरो भनेर गत २६ जुनमा पोस्ट गर्नु भएको हो । त्यसैले प्रताप जङ कुुलङ राई ज्युलाई म अब कुनै हालतमा पनि छाड्नेवाला छैन ।
याद रहोस्, प्रताप जङ कुुलङ राई ज्युले अभैm पनि केही नभएभैmँ गरेर कमेन्ट गर्दै बस्नु भएको (लगभग १० घण्टाअघि एक कमेन्ट गर्नु भएको छ) । तर, समय आएपछि सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ । त्यसैले प्रताप जङ कुुलङ राई ज्यु, अहिले रमाईलो मान्दै गर्नोस्, केही होइन भनेभैmँ गरेर ख्यालठट्टा गर्दै बस्नोस्, समय आएपछि थाहा पाउनु हुने छ, परिणाम भोग्नु हुनेछ ।